Umsebenzi we-Vineyard Haven Dredging Uqediwe - I-Ellicott Dredges Blog
Umsebenzi weVineyard Haven Dredging uqediwe
Source: IVineyard Gazette
Ngemuva kokulibaziseka kwezinyanga ezimbalwa, amaphrojekthi amabili okudonsela phansi eTisbury acishe aqeda.
Usihlalo wekomidi laseDredge, uNevin Sayre, ngoLwesithathu uthe basebenza emnyango weLake Tashmoo nasentshonalanga kwesango ethekwini laseVineyard Haven elimbozwe ekuqaleni kwale nyanga.
"Sijabule kakhulu ngemiphumela," kusho uMnu Sayre. Uthe isihlabathi sabekwa ebhishi lomphakathi eTashmoo kanjalo namabhishi omphakathi eGrove avenue nase-Owen Little Way.
"Siphinde saba nolwandle," kusho uMnu Sayre. “Yonke indawo egudle iGrove avenue yinhle ngokuhamba manje. Sengike ngabona abantu behamba bewela i-cross-country beya lapho, okuyinto obukade ungakwazi ukuyenza ngaphambili. ”
Amaphrojekthi we-dredge avunyelwe emhlanganweni waminyaka yonke wamadolobha wango-Ephreli, ngaphansi kwendatshana yokuboleka eyi- $ 500,000. ILake Tashmoo ijwayele ukudonswa njalo ngonyaka. Isikhathi sokugcina lapho ukungena entshonalanga ethekwini kudonswa khona kwakungo-1997.
Umsebenzi bekufanele uqale ngasekupheleni kukaMeyi kodwa wahlehliswa ngemuva kokuphuka kwemishini kasonkontileka uBarnstable Dredge. Ngemuva kwesizini yasehlobo, uMnu Sayre uthe, umsebenzi ube usuhlehliselwa emuva “emuva kwesikhathi ngangokunokwenzeka ngakho-ke unenzuzo enkulu ngehlobo elizayo.”
Umsebenzi eTashmoo waqala ngoDisemba. Ukudonswa kwetheku kulandele izithende zazo futhi kwathatha amasonto amathathu.
UMnu Sayre uthe ubengakawutholi umthethosivivinywa ovela kuBarnstable Dredge futhi akazi ukuthi isusiwe malini. Uthe ulindele ukuthi amaphrojekthi abe kwisabelomali, nokuthi idolobha selonge imali ebekiwe ngokwenza iTashmoo kanye netheku elibuyela emuva emuva.
"Akukho okukhombisa ukuthi kuzoba khona okumangazayo," kusho uMnu Sayre
Qala Iphrojekthi Yakho Yokudoba Lake Ngellicott